बिरालोले बाटो काट्यो भने के अशूभ हुन्छ ? या हुदैन ? कुकुरको ७ गतिविधिको कारणले अशुभ संकेत दिन्छ (भिडियो सहित) - Khabar Link
बिरालोले बाटो काट्यो भने के अशूभ हुन्छ ? या हुदैन ? कुकुरको ७ गतिविधिको कारणले अशुभ संकेत दिन्छ (भिडियो सहित)
हामीले बिरालोले बाटो काट्यो भने त्यो अशूभ भयो भन्दै दुःख मनाऊ गर्छौ र बिरालोले बाटो काटेको देखेपछि हामी जहाँको त्यही अडिन्छौ जबसम्म अन्य मानिसले त्यो बाटो काट्दैन तबसम्म हामीले त्यो बाटो काट्दैन । अन्य मानिसले बाटो काटिसकेपछी मात्र हामी त्यो बाटो आफ्नो गन्तव्यतर्फ हिड्छौ ।
तर, बिरालो सबै स्थितिमा अशुभ हुँदैन । यदी बिरालोले बायाँबाट दायाँतर्फ बाटो काटे मात्र अशूभ हुने गर्छ भने अन्य अवस्थामा बिरालोले बाटो काट्नु अशुभ नहुने बताइन्छ । यो पनि विश्वास गरिन्छ की बिरालोको पनि कुकुरको जस्तै छैठौ इन्द्रिय विकसित हुन्छ । बिरालोले पनि पछी हुने घटना बारे जानकारी दिने गर्छ ।
तन्त्र विज्ञानमा बिरालोलाई पनि महत्वपूर्ण जीव मानिन्छ । बिरालो यदी घरमा आएर रून थाले भने केही अशुभ हुने संकेत गर्छ भने बिरालोहरू एक आपसमा लडे भने तपाईको धन नाश हुने र लडाई हुने संकेत दिन्छ । बाँकी भिडियोमा हेर्नहोस
Posted in जानकारी, भिडियो, रोचक, विश्व, समाचार